October 2013 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
ကျုပ်နဲ့ ရန်ကုန် အထာ ၃
Author: lubo601 | 11:25 PM |2Comments |
ကျုပ်နဲ့ ဆရာမလေး ရွှေတိဂုံမှာ ဘုရားအတူတူဖူးကြတယ်…၊ ဆရာမလေးလို ချောမောလှပလွန်းတဲ့ သူတစ်ယောက်နဲ့ ကျုပ်တွဲသွားရတာ အတော့်ကို ပျော်တာပဲဗျို့..။ လေပေါ် မြှောက်နေသလား မှတ်ရ..၊ ဘုရားလာဖူးတဲ့သူတွေကလည်း ကျုပ်နဲ့ ဆရာမလေးကို ကွက်ကြည့် ကွက်ကြည့် လုပ်နေသေးရဲ့…၊ အေးလေ…၊ ကံကောင်းလှတဲ့ ကျုပ်ကို ကြိတ်အားကျနေကြတာလားမှ မသိတာ…။
၁။ အိုင်းစတိုင်းဟာ အသက် ၄ နှစ်အရွယ်ကစလို့ စကားပြောတတ်ခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် အသက် ၉ နှစ်အထိ စကားကို ပီပီပြင်ပြင်၊ များများစားစား မပြောနိုင်ပါဘူး။
ဥာဏ်ကောင်းလွန်းတဲ့ဘွားဘွား (အပြုံး..လက်ဆောင်)
Author: lubo601 | 12:38 PM | No မှတ်ချက် |
Shwe Eaim Si၈။ဟာသလွင်ပြင်
ဘဏ်တစ်ခုကို အဘွားကြီးတစ်ယောက် ရောက်လာတယ် ။
ပေါင်တစ်သန်း အပ်ဖို့ ဘဏ်သူဋ္ဌေးကို ပြောတယ် ။
ဘဏ်သူဋ္ဌေး ။ ။ ဒီလောက်များတဲ့ ငွေတွေ ဘယ်လိုရှာလာခဲ့တာပါလဲ ။
ဘွားဘွား ။ ။ ငါက အလောင်းအစားနဲ့ အကျိုးပေးတယ်လေ ။ အဲဒီလို ရှာလာတာ ။
ဘဏ်သူဋ္ဌေး ။ ။ မဖြစ်နိုင်တာပဲ ။
Trial Version Software တွေကို Full Version ဖြစ်အောင် Patch File အသုံးပြု၍ Install ပြုလုပ်နည်းနဲ့ ဖြေရှင်းနည်း
Published by Ÿê Kÿãw Þh¥õ // On Friday, February 22, 2013 //
ကျွန်တော် ဒီ တစ်ခါပြောပြပေးမဲ့ Post လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ တစ်ခါတစ်ရံ ကိုယ်အသုံးလိုတဲ့ Software တွေကိုစိတ်ကြိုက် Download လုပ် Install လုပ်ကြပြီး ကိုယ့် ကွန်ပျူတာထဲမှာ ထည့်သွင်းအသုံးပြုကြတာပေါ့ဗျာ။ဒါပေမဲ့ တစ်ချို့ Software ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ Company တွေက Freeware အနေနဲ့ အလကားအသုံးပြုခွင့်ပေးထားပြီး တစ်ချို့ Software တွေကျတော့ Trial Version အနေနဲ့ အသုံးပြုခွင့်ပေးထားပြီး ပိုက်ဆံပေးဝယ်ရတဲ့ ပုံစံမျိုးပေါ့ဗျာ။
Author: lubo601 | 12:36 PM | No မှတ်ချက် |
Shwe Eaim Si shared ရွှေအိမ်စည်စာကြည့်တိုက် - စာပေဒါနပြုသည်'s photo.
ဂျယ်ရီ ဆိုတဲ့ သူငယ်လေးဟာ အမြင်ကပ်စရာကောင်းလောက်အောင်ကို အကောင်းမြင်တတ်တဲ့ သူငယ်လေး ပါ။ သူဟာ အမြဲတမ်း လန်းဆန်းတက်ကြွနေပြီးတော့ အမြဲတမ်းလည်း အကောင်းမြင်တဲ့ စကားလေးတွေကိုဘဲ ပြောဆိုလေ့ရှိပါတယ်။ သူဟာ သူမတူအောင် ထူးချွန်တဲ့ မန်နေဂျာကောင်း တစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
Shwe Eaim Si ၈။ဟာသလွင်ပြင်
မိန်းကလေးများ၏ အယုံသွင်းစကားများကြောင့်သင့်ဘဝ ရေတိမ်မနှစ်ပါစေနှင့် .....
ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေး ချစ်ကြိုက်ကြပြီဆိုရင် မိန်းကလေးတွေဟာယောက်ကျားလေးတွေ ကို အယုံ သွင်းတတ်ကြပါတယ်။ မိန်းကလေးတွေဟာယောက်ကျားလေးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ရဖို့ဆိုရင် နည်းမျိုးစုံပြောဆိုတတ်ကြပါတယ်။
Author: lubo601 | 12:35 PM | No မှတ်ချက် |
သူရိယအလင်းဂျာနယ် စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ် ချိုးဖောက်
တောင်ကြီး တန်ဆောင်တိုင်တွင် လောင်းကစားနှင့် ပျော်ပွဲရွှင်ပွဲ အမည်ခံ လောင်းကစားမှုများ ခွင့်ပြုမည်မဟုတ်
အစ္စလမ်မစ်သူပုန်များ ဝင်လာမည့်ကို မြိတ်ဒေသခံများ စိုးရိမ်
ဓာတ်အားခ အပြောင်းအလဲကြောင့် မီးခိုးသုံးမှု ပိုများလာနိုင်
မောင်တောမြို့ပေါ်ရပ်ကွက် မီးရှို့ရာတွင် ပါဝင်သူ ၆၈ ဦး ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်စီချမှတ်ခံရ
နှစ်လုံးထီ ရောင်းသည်ဆိုပြီး ရှာဖွေခံရ၍ အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦး သတိလစ်သေဆုံး
ပြည်လွှတ်တော်အမတ်ကို ကျပ်သိန်းပေါင်းနှစ်သောင်း ရလိုမှုဖြင့်တရားစွဲဆို
ကရင်ပြည်နယ် သံတောင်မြောက်ပိုင်းမှ ဗိုလ်ကြီးတစ်ဦးကို နယ်ကျော်လက်နက် သယ်ဆောင်မှုဖြင့် စစ်ဆေးနေ
အခြားပါတီများကို ရန်ဖက်လိုသဘောမထားဖို့ ဦးရွှေမန်းပြော
Author: lubo601 | 8:09 AM | No မှတ်ချက် |
Shwe Eaim Si shared ရွှေအိမ်စည်စာကြည့်တိုက် - စာပေဒါနပြုသည်'s photo.
သူတို့ဘ၀ကိုသူတို့ မုန်းတယ်ဆိုတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။ သူတို့ဟာ သူတို့မှာရှိနေတဲ့အရာတွေနဲ့ မပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါဘူး။ အကယ်၍ သင်လည်း အဲလိုပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်ဟာ- ချမ်းသာမှ၊ အောင်မြင်မှ၊ မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေ အများကြီးရမှ၊ နာမည်ကျော်ကြားမှ၊ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ မိသားစုရှိမှ ပျော်ရွှင်မယ် ဆိုတဲ့ လူတွေထဲက တစ်ယောက် ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။
ချစ်ခြင်း မေတ္တာ ....
Author: lubo601 | 7:22 AM | No မှတ်ချက် |
Myanmar News Update's photo.
" တစ်ခါက အရမ်းဆင်းရဲတဲ့ လင်မယား ၂ယောက်ရှိတယ်.. တနေ့မှာတော့ မိန်းမဖြစ်သူက သူ့ယောက်ျား အလုပ်သွားကာနီးမှာ " ..သူ့ဆံပင်တွေ အရမ်းကိုရှည်လွန်းနေပြီဖြစ်လို့ ရှင်းလင်းဖို့ ဘီး ကောင်းကောင်းလေးတစ်ချောင်းလောက် ၀ယ်လာခဲ့ပေးပါလား " လို့ ပူဆာတယ်။
Gallstones (1) သည်းခြေကျောက် (၁)
ကျွန်တော့် အဖေမှာ သည်းခြေကျောက်တည်နေတာ သုံးလေးနှစ်လောက်ရှိပါပြီ။ ဘာနာကျင်မှုမှတော့ မရှိဘူးလို့ သူက ပြောပါတယ်။ တကယ်လို့ အဲဒီရောဂါက ကြာလာရင် ဘယ်လို ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါဦး ဆရာ။
ကိုယ့်ကိုကိုယ်တောင် သတ်သေသွားလောက်တယ် ...
"အော်ညီမလေး ABC ရလား"
"အင်းဒါဆိုရင် A ကနေ Z အထိရွတ်ပြ"
ဖေ့စ်ဘုတ် ကာတွန်းစုစည်းမှု (၃၀-၁၀)
စိတ်မပျက်သမျှ စီးပွားဥစ္စာ ကျန်းမာခြင်းပါ ပျက်သော်လည်း ကြောက်စရာမရှိချေ။ စိတ်အားပျက်မှ အကုန်ပျက်၏။
"ပျက်လျှင်အစဉ် ပြင်လျှင်ခဏ၊ မသေမချင်း အားမလျှော့ရ၊ ဖြစ်ရမည်" ဟူသောစိတ်ကို အမြဲထားပါလေ။
အပျက်ကို မတွေးလေနှင့် မထင်လေနှင့်။
ကျွန်မဘ၀ရဲ့ ပုံရိပ်လွှာ ( ပထမပိုင်း )
*** ကျွန်မဘ၀ကို ကျွန်မ ကျေနပ်ရဲ့လားဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ***
ဖန်တစ်ရာသေအောင် မေးတတ်သူ မိန်းမ တစ်ယောက် ။ သူမနာမည်က ဇာဖြူ ။
သိပ်ကို စိတ်ကူးယဉ်တတ်သူ နူးညံ့တဲ့ဂရုစိုက်မှုတွေကို ခုံမင်တက်မက်တတ်သူ
တစ်ဦးလို့ ဖြူ ကို သမုတ်ပါမည်ဆိုလျှင် ကျေနပ်စွာ ခံယူလိုက်ပါမည် ။
ကျုပ် လူပျိုကြီး ဖြစ်ရတာ အကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူး
Thanlay Ko addedaphoto from October 29, 2013 to his timeline.
အစက ကျုပ်လည်း ချစ်သူရှိတာပဲဗျ။ ခက်တာက
ကျုပ်ကအိမ်မှာ ခွေးလေးတစ်ကောင်မွေးထားတယ် 'ပလူတို' တဲ့
ခွေးလေးကို ကျနော်က ခင်တွယ်နေတာကို ရည်းစားကမကြိုက်ဘူး
အမြဲတမ်း ပြသနာရှာတယ်... ...
Hair & Health ဆံပင်က သင့်ကျန်းမာရေးကို ပြောနေတယ်
၂၀၁၂ ဧပြီလ (၁၁) ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ဖေဖော်ဝါရီလကုန်တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဌ သူရဦးရွှေမန်းမှ အစိုးရအဖွဲ့ကိုသော်လည်းကောင်း၊ သက်ဆိုင်ရာ ဝန်ကြီးများ ကိုသော်လည်းကောင်း မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက် နှင့်မှ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်းမရှိဘဲ ဝန်ထမ်းများ လစာ တိုးမြှင့်ရေးကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ရုတ်တရက် ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။
အထက်မင်းလှမြို့နယ် ထန်းကိုင်းရေနံမှော် တစ်ပတ်အတွင်းဖယ်ရှားပေးရန်အမိန့်ထုတ်
မလေးသို့ခိုးထွက်သည့် ဘင်္ဂါလီအများစု ရသေ့တောင်တွင် တိမ်းရှောင်နေဟုဆို
အမုန်းတရားမရှိသဖြင့် အောင်မြင်မှုရခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြော
ယောင်္ကျားတွေရဲ့ အချိန်အလိုက်ပြောင်းလဲတတ်ပုံလေး (၆ပတ် ၆လ ၆ နှစ်)
ချိန်၆ ပတ် – ချစ်တယ်၊ ချစ်တယ်၊ ချစ်တယ်။
၆ လ – ချစ်တာပေါ့ကွာ။
၆ နှစ် – မင်းကို ငါ မချစ်ရင် အစကတည်းက အားအားယားယား ချစ်ခွင့်တောင်းမလားဟ။
Tue Oct 29, 2:20 pm
သတင်း စာ၊ ဂျာနယ်များတွင် ခပ်စိပ်စိပ် တွေ့လာရသော၊ အရေးအသား တွေနှင့် ပတ်သက်ပြီး မိတ်ဆွေတစ်ယောက်၏ မှတ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူ ဘာမှ ပြန်မဖြေခဲ့ပါ။ သူ့စကား အသုံးအနှုန်းတိကျပုံ ကိုတော့ သဘောကျသွားသည်။ အထူးသဖြင့် “ခုတစ်လော” ဆိုသည်နှင့် “ပြန်” ဆိုသော ကြိယာဝိသေသနများ …။ ဟုတ်သည်ကော …။ စာရေးသူအနေနှင့် ဝေဖန်ရေး အမည်ခံ အပုပ်ချပွဲများနှင့် ကြုံရသည်မှာ တစ်ကြိမ်မှ မကတော့ဘဲ …။
ငါး ပိုစားသင့်သော အကြောင်းရင်း ၁၀
အစားအစာတွေများစွာထဲမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွက် အမှန်တကယ်ပဲ အကျိုးရှိစေပြီး မရှိမဖြစ် အာဟာရတွေ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာမျိုး ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင်တော့ သင့်နေ့စဉ် အစားအစာတွေထဲကို မဖြစ်မနေ ထည့်ပေါင်းဖို့ လိုအပ်နေပါပြီ။
၈၈ တောခိုကျောင်းသားများ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ် ABSDF သေ့ဘောဘိုးစခန်းဖြစ်ရပ်မှန်များ - မိုးတိမ် (သေ့ဘောဘိုး)
Author: lubo601 | 2:33 PM | No မှတ်ချက် |
စာအုပ်အမည် - ၈၈ တောခိုကျောင်းသားများ ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်
စာရေးသူအမည် - မိုးတိမ်(သေ့ဘောဘိုး)
စာအမျိုးအစား - သမိုင်း(နိုင်ငံရေး)၊မှတ်တမ်း
Download -- http://hngetngaimrokhimisistory.blogspot.com/2013/10/absdf.html
၁။ ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေ မိန်းမဆို ခန္ဓာကိုယ်အလှမှ မ
ဟုတ်ပါဘူး။ နှစ်လိုဖွယ် အပြုံးနဲ့ သပ်ရပ်သန့်ရှင်းတဲ့ မျက်နှာမျိုး
၂။ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားတွေ တကယ်တော့ မာယာကိုလည်း ချစ်တတ်ပါတယ်။
" တို့တိုင်းပြည်မှာ မအောင်မြင်တဲ့ စီမံကိန်းတွေကြောင့်သာ ထောင်တန်း ကျရရင် တို့ရဲဘော်တွေ တစ်ယောက်မှကျန်မှာ မဟုတ်ဘူး . . မင်းပူမနေနဲ့ . . "
Author: lubo601 | 2:32 PM | No မှတ်ချက် |
ညွှန်ချုပ်နဲ့ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှုး နှစ်ဦး ရယ်ရယ်မောမောပြောနေကြတာ နားထောင်ပြီး မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ငိုချင်သလို ဖြစ်ခဲ့ရတယ် . . .
DG ကစပြောတယ် . .
ရွှေဖား တစ်ကောင်မှ ထွက်တဲ့ ၁ မီလီဂရမ် အဆိပ်ဟာ ကြွက်ပေါင်း ၁ သောင်း သတ်လို့ ရပါတယ်။
တည်ငြိမ်အာမခံရှိမယ့် ဘဏ်စနစ် ပေါ်ပေါက်ရေး (ကမ္ဘောဇဘဏ် ဒု ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်)
October 29, 2013 at 11:35am
ကမ္ဘောဇဘဏ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင် ကမ္ဘောဇဘဏ် ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးသန်းလွင်
ဒီတပတ် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေးရာ အစီအစဉ်မှာ မကြာသေးခင်က အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ဝါရှင်တန်မြို့တော်မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နဲ့ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့ နှစ်ပတ်လည် ညီလာခံမှာ နိုင်ငံတကာ ဆင်းရဲမွဲတေမှု ပပျောက်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်အဖြစ် မြန်မာနိုင်ငံလို ဖွံ့ဖြိုးဆဲ နိုင်ငံ မျိုးတွေမှာ အသေးစား ချေးငွေလုပ်ငန်းလေးတွေ မတည်ပြီးဆောင်ရွက်သွားရေးကို နည်းလမ်းတရပ်အနေနဲ့ တိုးချဲ့လုပ်ဆောင်ဖို့ နှီးနှောဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့တယ်
Author: lubo601 | 9:05 AM | No မှတ်ချက် |
အထူးသဖြင့် ကိုယ့်နာမည်ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် စွမ်းအင်များ မပြုန်းတီးစေဖို့ အလွန်ပဲ အရေးကြီးလှသည်။ ကိုယ့်နာမည်ကိုယ် မှည့်ချင်သလို မှည့်လို့ရသည် မှန်သော်လည်း ဘေးဘီလောက ကို အားနာရမည်။
IQ နိမ့်တဲ့ ကျနော်
Thanlay Ko October 29, 2013 at 5:26am
စာတွေလည်း သင့်တင့်လျှောက်ပတ်သလောက် သင်ခဲ့ပြီ
Author: lubo601 | 8:35 AM | No မှတ်ချက် |
Author: lubo601 | 8:31 AM | No မှတ်ချက် |
တပ်မတော်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းခေါင်းဆောင်သောရဲဘော်သုံးကျိပ် သွေးသောက်သစ္စာဂတိပြု ကာပြည်သူ၏ အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်ကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်အတွက် စနစ်တကျအမျော်အမြင် ရှိရှိဖြင့် စစ်စည်းကမ်း၊နည်းဥပဒေများ ၊ လိုက်နာရမည့်ကျင့်ဝတ်သိက္ခာများ၊ ပြဌါန်းကာ ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါ။
ကျွန်ုပ်တစ်သက် ငွေပေးမဝယ်ဖူးသောပစ္စည်း နှစ်မျိုး
Author: lubo601 | 5:55 PM | 1 Comment |
Myo Chit Myanmar October 28, 2013 at 5:40pm
ဒီနေ့ တစ်ခုတွေးမိတယ် ..အမေရိကားရောက်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေအတွင်းမှာ ကျွန်တော် ပိုက်ဆံတွေ အများကြီး ရှာခဲ့ဖူးသလို အများကြီးလဲ သုံးခဲ့ဖူးတယ်။ လိုအပ်လို့သုံးတာတွေလဲပါသလို မလိုအပ်ဘဲဖြုံးတာတွေ ပါတယ်။ အကျိုးရှိတာတွေလဲ ပါသလို အကျိုးမရှိတာတွေလဲပါတယ်။
Author: lubo601 | 5:54 PM | No မှတ်ချက် |
အခုလိုရာသီအကူးအပြောင်းမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ ဝေဒနာကတော့နှာပိတ်ခြင်းပါပဲ။ ဝေဒနာက သိပ် မဆိုးရွားပေမယ့် လူကိုခံရခက်စေတာမို့ မြန်မြန်သက်သာပျောက်ကင်းနိုင်မယ့် အိမ်တွင်းနည်း လမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြချင်ပါတယ်။ နှာပိတ်နေတဲ့အခါ လူ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အစိုဓာတ်ကို မြှင့်တင်နိုင် ဖို့အတွက် အရည် ကို များများသောက်ပေးရပါမယ်။
``` ဖုတ်သွင်းဗျိုင်းနှင့် ဗျိုင်းနားဘုရင် ...´´´
Author: lubo601 | 2:23 PM | 1 Comment |
အမျိုးကောင်းသား shared ကွန်ဆူး မား's photo.
တစ်ခါက တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ.. ဘုရင်းကြီး ဆုံးပါးသွားတယ်တဲ့... ခမ်းခမ်းနားနား ပြောရရင်တော့ နတ်ရွာစံတယ်ပေါ့...။ အဲဒီတော့ ထီးမွေနန်းလျာကလည်း မရှိ... ဘာလုပ်ရမှန်းလည်း မသိလေတော့... မှူးကြီး မတ်ရာတွေက ဖုတ်သွင်းရထား သို့မဟုတ် ဖုတ်သွင်းဗျိုင်း လွှတ်ဖို့ စီစဉ်ကြပါသတဲ့...
Author: lubo601 | 12:11 PM | No မှတ်ချက် |
လက်ထပ်ပြီး သုံးလခန့်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။ အလုပ်မှပြန်လာသော ယောက်ျားအား
မိန်းမလုပ်သူက အိမ်ပေါက်ဝတွင် ထွက်ကြိုပြီး ပြောသည်။
"မောင် လောလောဆယ် နှစ်ယောက်ပဲ နေတဲ့ကျွန်မတို့ အိမ်လေးမှာ မကြာခင် သုံးယောက် ဖြစ်လာတော့မယ်"
Author: lubo601 | 12:10 PM | No မှတ်ချက် |
7:10:00 am ဘလော့ခရီးသည်
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကတ်ပြားများ စမတ်ကတ်အဖြစ် ပြောင်းမည်
တယ်လီနော မြန်မာ အလုပ်ခေါ်
ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့မှ ၀င်ရောက်လာသူ ဒါဇင်နှင့်ချီပြီး ရသေ့တောင်မြို့နယ်တွင် ဖမ်းမိ
ဂန့်ဂေါမြို့နယ်ကရှားရှာပါးပါးအမျိုးသမီး ရပ်/ကျေး အုပ်ချုပ်ရေးမှူး
Trial Version Software တွေကို Full Version ဖြစ်အော...
ယောင်္ကျားတွေရဲ့ အချိန်အလိုက်ပြောင်းလဲတတ်ပုံလေး (၆ပ...
တည်ငြိမ်အာမခံရှိမယ့် ဘဏ်စနစ် ပေါ်ပေါက်ရေး (ကမ္ဘောဇဘဏ...
ပီမိုးနင်း ၏ စာပေလက်ရာများ စုစည်းမှု
ယှဉ်ပြိုင်မှုရှိသည့် အာဏာရှင်စနစ် ပေါ်ထွန်းခြင်း (၁)
၆၃၈။ Windows XP Genuine ပြုလုပ်နည်း ( ၂ )
အရာရာတိုင်းဟာ “၀င်လေ ထွက်လေ”
ရှေးရှေးတုံးက မလေးရှား (၀ါ) မလ္လာယုနိုင်ငံတော်သမိုင်း
မိမိစက်ထဲက Data အချက်အလက်တွေ သူများဖွင့်ကြည့်လို့မ...
စူပါအတ္တ နဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ်
လူ သာလျှင် ငြီးငွေ့တတ်သော သတ္တဝါ
ထိပ်ပြောင်နေသူများနှင့် နေရာကွက်၍ ဆံပင်မပေါက်သူမျာ...
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း အုတ်ခဲနှင့် ပြင် ၊ သစ် ပြဿနာ
ကဗျာလေးတောင် ငိုနေပြီ မောင်”
၆၅၇။ Windows7Back up and Restore ပြုလုပ်နည်း
"နောက်ဆုံးရေးတဲ့ email စာ"
~Invalidation, Co-dependence & Suppression~
နှစ်သစ်တွင် သင့် ရဲ့ငွေကြေးကဏ္ဍတိုးတက်ရန် လုပ်ဆောင...
ခုခေတ်ကျောင်းသားတွေ စာဖတ်တာကို ဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲ
လမ်းခွဲပြီး (၁ဝ) နှစ်
ကယ်လီဖိုးနီးယားတွင် ငလျင်လှုပ်မည်ဟု ကောလာဟလများ ထွက...
ဘစည် (စင်ကာပူ) မှ ဧရာဝတီ အောင်ဇော်သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
" အပျင်းပြေ _ ၆ "
Paco အမြန်ပြန်လာပါ သားကို အဖေချစ်တယ်